E wepụtalarị Kali Linux 2020.4 ndị a bụ akụkọ ya | Site na Linux
E wepụtalarị Kali Linux 2020.4 ma ndị a bụ akụkọ ya
N'oge na-adịbeghị anya Emepụtara ọkwa ọkwa Kalin Linux 2020.4, n'ime emeela ọtụtụ mgbanwe dị mkpa, ebe ọ bụ na mgbanwe si ZSH na Bash na onyonyo desktọọpụ, yana ụdị ọhụrụ nke Win-Kex, agbakwunyere ngwaọrụ ọhụrụ na ndị ọzọ.
Maka ndị na-amaghị Kali Linux, ha kwesịrị ịma na e mere ya iji nwalee usoro maka adịghị ike, nyocha, nyocha data nyocha ma chọpụta nsonaazụ nke mwakpo ọjọọ.
Kali gụnyere otu nchịkọta kachasị akụrụngwa maka ndị ọkachamara nke nchekwa kọmputa, site na ngwa iji nwalee ngwa weebụ yana ịbanye na ntanetị ikuku na mmemme iji gụọ data sitere na ibe RFID. Ngwa ahụ gụnyere nchịkọta nke ịkpa arụ na ihe karịrị ọrụ 300.
1 Kali Linux 2020.4 Key New Atụmatụ
2 Budata ma nweta Kali Linux 2020.4
Kali Linux 2020.4 Key New Atụmatụ
Na ụdị ọhụrụ a nke Kali Linux 2020.4, ndị mmepe kwuru na de ndabere ZSH shei ka eji karịa Bash.
Ihe kpatara ịgbanwere na ZSH ka ekwupụtara dị ka inwe ikike dị elu yana ike iji Bash hapụrụ dịka nhọrọ (chsh -s / bin / bash), a na-akpọ usoro iwu ZSH.
Mgbe ị na-abanye na njikwa ahụ, a gosipụtara ozi na njikọta na akwụkwọ ahụ, foto na ntuziaka nwụnye pụrụ iche igbanwe / usr / bin / eke si na Python 2 rue Python 3.
Egosiputakwa na emeputara ohuru maka AWS EC2 ma gbakwunye nkwado maka GovCloud.
Ọzọkwa, nke ahụ na ụdị ọhụrụ a nke Kali Linux 2020.4 a na-etinye nsụgharị ngwungwu emelitere nke ọtụtụ sistemụ sistemụ, nke ejikọtara ya na ndị Debian, dị ka Linux kernel nke emelitere na nsụgharị 5.9, GNOME ka 3.38 na KDE gaa 5.19.
Site na ndabara, proxychains4 ngwugwu eji (ProxyChains-NG), nke a na-eji zipu njikọ site na onye nnọchi anya SOCKS4a / 5 ma ọ bụ HTTP.
Na nke ngwaọrụ ọhụrụ agbakwunyere:
Okpokoro Metasploit v6
Na akụkụ Win-Kex (Windows + Kali Desktọpụ Ahụmahụ) ezubere iji na-agba ọsọ na Windows na WSL2 gburugburu ebe obibi (Windows Subsystem maka Linux), nke a emelitere ma tinyekwa ụdị ọhụrụ "Ọnọdụ ọnọdụ emelitere nke ọma" (–Esm), nke na-eji RDP nweta ohere.
N'otu oge ahụ, nkwupụta nke NetHunter 2020.4 kwadebere., ebe maka ekwentị mkpanaka dabere na ikpo okwu gam akporo na nhọrọ nke ngwaọrụ iji nwalee usoro maka adịghị ike.
Iji NetHunter, ọ ga-ekwe omume ịchọpụta mmejuputa nke mwakpo a kapịrị ọnụ na ngwaọrụ mkpanaka, dịka ọmụmaatụ, site na i emomi nke ngwaọrụ USB (BadUSB na HID Keyboard - ịulationomi ihe nkwụnye ntanetị USB nwere ike iji maka ọgụ MITM, ma ọ bụ keyboard USB nke na-arụ ọrụ nnọchi anya agwa) yana imepụta ebe nweta adịgboroja (MANA Evil Access Point).
NetHunter arụnyere na ọnọdụ ọkọlọtọ nke ikpo okwu gam akporo n'ụdị oyiyi chroot, nke na-agba ụdị Kali Linux nke ọma.
Nke mgbanwe NetHunter 2020.4, menu ohuru iji kwado ma weghachite faịlụ nhazi gosipụtara, na ịgbanwe animation buut.
Agụnyere modul "Magisk Persistence", nke na-enye gị ohere ịgabiga ibu nke Magisk (na-enye gị ohere igbanwe usoro sistemụ ma megharia ohere mgbọrọgwụ) mgbe ị wụnye NetHunter.
Budata ma nweta Kali Linux 2020.4
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » E wepụtalarị Kali Linux 2020.4 ma ndị a bụ akụkọ ya
Xfce 4.16 Uzo nke abuo ugbu a